YSX Listing and IPO Services for Company-mm | CB Securities
အစုရေ ၁၀,၀၀၀ နှင့်အထက် ရောင်းဝယ်ခြင်း
IPO Shares များဝယ်ယူခြင်း
ကုမ္ပဏီများအတွက် YSX သို့စာရင်းဝင်ခြင်းနှင့် IPO ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ
ကုမ္မဏီများ၏ အများပြည်သူထံ ကနဦး အစုရှယ်ယာရောင်းချခြင်းနှင့် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
CB Securities အနေဖြင့် ကုမ္မဏီများ၏ အများပြည်သူထံ ကနဦး အစုရှယ်ယာရောင်းချခြင်းနှင့် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဥပဒေအရ ကုမ္မဏီတစ်ခုသည် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ရန် နှင့် အများပြည်သူထံ ကနဦး အစုရှယ်ယာရောင်းချခြင်းပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အများပိုင်ကုမ္မဏီဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အများပြည်သူသို့ ကနဦး အစုရှယ်ယာများ ရောင်းချခြင်းကို ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အိတ်ချိန်းသို့ မဝင်ရောက်ဘဲ Over-the-counter (OTC) မှတဆင့် အစုရှယ်ယာရောင်းချခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း IPO ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းသို့ စာရင်းဝင်ခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုသော ကုမ္မဏီများအနေဖြင့် စာရင်းမဝင်မှီ (၂)နှစ်တာကာလအတွင်း အမြတ်အစွန်းရရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ စာရင်းဝင်ခြင်းဆိုင်ရာ အနိမ့်ဆုံး စံသတ်မှတ်ချက်များကို ဤနေရာတွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
IPO ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ကုမ္မဏီတစ်ခုချင်းစီ၏ လက်ရှိအနေအထားပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံး သို့မဟုတ် အချိုကို ဆောင်ရွက်ရလေ့ ရှိပါသည်။
အလားအလာကောင်းမွန်ပြီး ခိုင်မာမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်များနှင့် IPO ပြုလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များ ရေးဆွဲခြင်း
ကုမ္မဏီ နှင့် ကုမ္ပဏီအုပ်စု(ရှိလျှင်)တို့၏ ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတို့ကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်းများ
အများနှင့်မဆိုင်သောကုမ္မဏီ မှ အများပိုင်ကုမ္မဏီအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း
ဦးရေ (၅၀) ထက် မကျော်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ ဦးစွာ ရှယ်ယာများရောင်းချခြင်းများ
အလားအလာညွန်းတမ်း (သို့) စာရင်းဝင်ခြင်းဆိုင်ရာဖွင့်ဟကြေညာချက်စာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ထားခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင် နှင့် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းထံသို့ အချက်အလက်များတင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံခြင်း
ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများအား ဖိတ်ခေါ်၍ ကနဦးအစုရှယ်ယာရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်ပြပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း
ဈေးကွက်တွင်း ဝယ်လိုအား စမ်းသပ်ခြင်းများ
အစုရှယ်ယာလက်မှတ်စာရွက်များအား အီလက်ထရောနစ်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲမှတ်တမ်းတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
စာရင်းဝင်ခြင်း နှင့် ကနဦးအစုရှယ်ယာရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအား ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကုမ္မဏီ၏ အသင့်ရှိမှု အနေအထားအား လေ့လာဆန်းစစ်သည့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူလိုပါက contact@cbsecurities.com.mm သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့၍ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
#03-04, Union Financial Center, Corner of Maharbandoola Road & Theinphyu Road, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.
01 8610331, 01 8610332, 01 8610333, 01 8610334
Click Here to Download CB Trader Mobile Apps
"CB Securities is licensed (License Number:004) by the Securities and Exchange Commission of Myanmar, SECM. The value of investments can fall as well as rise. You may not get back what you invest. Past performance is not indicative of future results. Before deciding to invest in stocks, you should carefully consider your investment objectives, level of experiences and risk appetite."
2019-2022 CB Securities Limited. All Rights Reserved. Web Design by NetScriper